Fulkaano muddo dheer seexanaysay oo nolosha Iceland ku soo noolaatay - Wardeeq 24 TV Fulkaano muddo dheer seexanaysay oo nolosha Iceland ku soo noolaatay Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Fulkaano muddo dheer seexanaysay oo nolosha Iceland ku soo noolaatay
Fulkaano muddo dheer seexanaysay oo nolosha Iceland ku soo noolaatay
Fulkaano muddo dheer seexanaysay oo ku taal Jasiiradda Reykjanes Peninsula ee ku taal koonfur-galbeed ee Iceland ayaa nolosheeda ku soo dhacday habeenkii Jimcaha, iyada oo labada dhinacba u daadisay lava laba dhinac oo ka mid ah aaggaas markii ugu horreysay ee ay ka qaraxday fulkaano ku dhowaad 900 oo sano.
Iftiinka ka soo baxa laafka waxaa laga arki karaa hareeraha caasimadda Iceland, Reykjavik, oo u jirta 32km (20 mayl).
Waaxda Gurmadka Degdegta ah ayaa sheegtay inaysan filaynin daad-gureynta sababtoo ah fulkaanaha wuxuu ku jiraa dooxada fog, oo qiyaastii 2.5km (1.5 mayl) u jirta wadada ugu dhow.
Waxaa dhawaanahan jiray astaamo suuragal ah inuu qarxo, iyadoo dhulgariirradu ay dhacayaan maalin kasta saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay.
Laakiin khubarada fulkaanaha wali lama filaan ayey ku noqotay maxaa yeelay dhaqdhaqaaqa dhulgariirku wuu xasilloonaa inta uusan qarxin.
Sabtidii, khubaradu waxay sheegeen in fulkaanaha uu u muuqday mid sii yaraanaya oo aan wax khatar ah ku haynin dadka.
Jimcihii Xafiiska Saadaasha Hawada ee Iceland ayaa ku dhawaaqay volcano, oo ku taal koonfurta-galbeed ee caasimadda, Reykjavik, ayaa qarxay ka dib markii kumanaan dhulgariir oo yaryar ka dhacay aagga toddobaadyadii la soo dhaafay. [Sawirada Vilhelm Gunnarsson / Getty]
Previous articleDhowr qof ayaa lagu diley gov’t attack on hospital in Syria’s Idlib
Next articleFM-ta Ethiopia, wakiilka Mareykanka waxay kawada hadlayaan biyo xireenka Renaissance